Marka waad xaqiijin kartaa haddii iPhone uu qufulan yahay iCloud | Wararka IPhone
Tani waa sida aad ku xaqiijin karto haddii iPhone uu xiran yahay iCloud
Sidaad ogtahay, bishii Janaayo shirkadda Cupertino waxay go'aansatay inay joojiso bixinta adeegga khadka tooska ah ee ka caawiyay dad badan oo markii ugu horraysay adeegsada iPhone inay iibsadaan gacan labaad oo wanaagsan, waana taas in Apple ay lahayd adeeg baadhis otomaatig ah oo xannibaysa iCloud iyada oo loo marayo degelkeeda. Si kastaba ha noqotee, wax walba waa la dhigayaa, waxaanan horeyba u helnay, mahadsanid dadka isticmaala, hab lagu heli karo macluumaad isku mid ah iyadoo la adeegsanayo habab kale. Marka waad xaqiijin kartaa haddii iPhone uu xiran yahay ama uusan marin iCloud habka ugu fudud ugana dhex mari karo Apple laftiisa.
Xaqiiqdii, sida aan u sharaxeyno, waxay umuuqan kartaa dibin daabyo dhab ah, laakiin warbaahinta ayaa lamid ah DaalacoBoot waxay ogaadeen inay waxtar leedahay sida ay u fududahay.
Marka hore, waxa aan u baahanahay waa IMEI ama MEID ee iPhone-keena ama midka aan dooneyno inaan hubino, waxaan si fudud uga heli doonnaa sanduuqa ama macluumaadka aaladda ee dejinta gudaheeda. Markii aan gacanta ku dhigno, waxaan aadi doonnaa websaydhka taageerada shirkadda Cupertino iyada oo loo marayo CADADKA.
Hadda waa inaan doorannaa mid kasta oo ka mid ah qaybaha la xiriira, iyada oo aan la doorbideynin, muhiimaddu waa in horay loo sii socdo oo hadda waad ogaan doontaa sababta. Mar alla markii aad na siiso awoodda "noogu soo dir dayactirka," waxaan ku gallin doonnaa lambarka ku jira sanduuqa qoraalka ku qoran sawirka madaxa. Kadib, Haddii aan la kulanno qalab ku xanniban illaa iCloud, digniin ayaa soo muuqan doonta taasoo tilmaamaysa inaanan awood u lahayn inaan dirno aaladda haddii ay hadda ku xiran tahay iCloud.
Sidan oo kale, waxaan qaadan karnaa taxaddar ugu horreysa marka ay timaaddo helitaanka gacanta labaad ee iPhone, hubinta in aan naloo siin "Ghanna".
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Tani waa sida aad ku xaqiijin karto haddii iPhone uu xiran yahay iCloud
berenice gonzalez almendarez dijo
Waxaan hayaa iphone 6s xiran oo lagu daray waxaan hilmaamay lambarkayga sirta ah
Waxaan garaacayay kuwa tufaaxa ah laakiin jawaab iima hayaan waxaan haystaa tigidhka iibsashada oo aan u diro sawir
Maxaan sameyn karaa si aan u furo?
Ku jawaab Berenice gonzalez almendarez
GPU-da iPhone-ka soo socda ayaa diiradda lagu saari doonaa Xaqiiqada Dareenka
Siri ma u fudud tahay barashada luqad cusub? Sidee Apple u sameeyaa inay ku baraan